China katatu-mutsara wekuchera muchina fekitori uye vagadziri | Gladline
Kuvesa matanda Drilling Machine ndeye yakawanda-gomba yekugadzirisa michina ine akawanda ekuboora matomu uye inogona kushanda pamwechete. Kune imwechete-mutsara, matatu-mitsara, matanhatu-mitsara zvichingodaro. Drilling Machine inoshandura echinyakare echinyorwa mutsara mutsara wekuchera chiito muchimakanika chiito, icho chinobva chagadziriswa nemuchina.
Max. dhayamita yemakomba 35 mm
Kudzika kwemakomba akaboorwa 0-60 mm
Huwandu hwezvakarukwa 21 * 3
Center chinhambwe pakati pezvokurukisa 32 mm
Kutenderera chokurukisa 2840 r / min
Yese saizi yemotokari 4.5 kw
Inzwi voltage 380 v
Kumanikidzwa kwemhepo 0.5-0.8 Mpa
Gesi kushandiswa kwekuchera mapaneru gumi pamaminetsi anenge 20L / min Zvingangodaro
Max. chinhambwe chemisoro miviri yekureba 1850 mamirimita
Kureba kwekushanda chikuva pasi pasi 800 mm
Kupfuura saizi 2600x2600x1600 mm
Kukura kwepacking 2700x1350x1650 mm
Kurema 1260 makirogiramu
Kuti uve nechokwadi chekuchera uye chigadzirwa chemhando, iko kuchera kwepaneru fenicha zvikamu zvinowanzoitwa nemitsara yakawanda yeDrilling Machine. Icho chibooreso chinzvimbo pane iyo yakawanda-mutsara chibooreso chiri 32mm. Nyika shomanana chete ndidzo dzinoshandisa mamwe modulus drill bit spacing, kazhinji zvigaro zvechibhorani zvakarongedzwa zvakarongedzwa mutsetse wese. Iyo yakatarwa chibooreso chigaro chinoumbwa nemaviri akazvimirira mitsara yezvigaro. Huwandu hwemitsara yezvigaro zvekuchera emitsara-yakawanda mabhora anowanzo kubva pamitsara mitatu kusvika pamitsara gumi nemiviri (zvigaro zvekuwedzera zvekuwedzera zvinogona kuwedzerwa kana zvichidikanwa) zvinowanzo kuve nezvigaro zvekukwirisa zvigaro uye zvigaro zvakadzika zvekumusoro. Kana paine zvakakosha zvinodiwa kana huwandu hwemitsara yezvigaro hwakakura, zvigaro zvekumisikidza zvigaro zvine zvigadziriso zvepamusoro uye zvepasi zvinogona kushandiswa. Izvi zvinofanirwa kuve zvinoenderana nezvinodiwa mukugadzira uye kugadzirisa kunyatso kudikanwa Huwandu hwenzvimbo dzinoverengeka-mitsara Drilling Machine zvigaro mukugadzira ndeye 3 mitsara, 6 mitsara, nezvimwe.
Woodworking Drilling Machine Kuraira:
1. Chenesa tafura yemuchina nenguva mushure mekunge basa rapera,
2. Chenesa machipisi ehuni panjanji yemutungamiriri uye parutivi kudzivirira kujamha kwemuchina nekuda kwekukanganisa kwemachipisi.
3. Gara uchichenesa lead sikuruu kudzivirira chinhu chekune dzimwe nyika kubva kunamira kune chinotungamira sikuru. Iyo inotungamira sikuruu ndiyo yepamusoro pekutanga pamidziyo, inokanganisa kurongeka kwemuchina, uye sikuruu inotungamira inoita basa rakakosha mukufambisa nzira.
4. Chenesa maindasitiri ekudzora bhokisi nguva dzose, guruva ndiyo mhondi huru yekuchera.
5. Kubviswa kweguruva uye basa rekuzadza mafuta rinofanira kuitwa pane inotsvedza nzira yemutsara wekuboora vhiki rega rega.
Pashure: Guruva Muunganidzi
Zvadaro: China 3D 3axis / 4axis CNC Woodworking Router 1325 ine yeFenicha
Multi chokurukisa Drilling Machine
Wood Kuchera Machine
Double-musara Drilling Machine
Single-musara Drilling Machine